Shirkaddaha Somtel iyo Djibouti Telecom Oo Ku Shirkoobay Fibre Optic Leh Xawaare Sare. – somalilandtoday.com
(SLT-Nairobi)Sida uu daabacay Wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya waxay shirkadaha SOMTEL, TE SubCom iyo Djibouti Telecom ku shuraakoobeen xadhig fibre Optic oo aan noociisu hore u soo gelin qaaradda oo xawaare aad u sarreeya leh, kaasoo xiriirin doona dalalka Geeska Afrika, kaasoo uu dhanka Xeebta ka soo geli doono.
Shirkadda TE SubCom, oo aan loo daba fadhiisan tiknoolajiyadda badda hoosteeda iyo adeegyada la xiriira ayaa iyadu qaybin doonta mas’uulna ka ahaan doonta dhigidda xarigga.
Sidoo kale Shirkadaha ayaa sheegay in awoodda wax-wada-lahaanshani soo kordhiyey ay ka mid tahay in kharash badan loogu badbaadiyo loo-adeegaha iyada oo la isticmaalayo aqoonta sare iyo tiknoolajiyadda casriga ah ee TE SubCom.
Djibouti Telecom SA waxa weeye shirkadda siisa Jabbuuti oo dhan laymanka tilifoonka ee dhulka, Moobilka iyo Internet’ka; halka SOMTEL ka tahay Isgaarsiinta u horraysa Soomaalida eek a wada shaqaysa, iyada oo sidoo kale Intenet iyo adeeg tilifoonba bixisa. Waxa kale uu SOMTEL taariikhda ku gashay inay noqotay shirkaddii u horreysey e bixisa adeegga 3G iyo LTE, iyada oo, isla markaa, nidaamka isdhex-marka lacagaha iyo nidaamka maaliyadeed ee suuqyada wax badan kaga beddeshey adeeggeeda eDahab.
Cabdirashiid Ducaale, Maamulaha Guud ee Shirkadaha Dahabshiil, waxa uu tibaaxay in xadhiggan badda hoos marayaa uu loo-adeegaha siin doono Internet uu qaymo ahaan awoodi karo, iyada oo uu, isla mar ahaantaa, culayska hadda ka jira nadaamyada la isticmaalo meesha ka saari doono.
“Waxa aanu sii xejineynaa heshiisyada aannu kula jirno, annaga oo ixtiraamaynaa, lana shaqaynaynaa shirkadaha aannu shuraakada haatan ku nahay Xadhig/Keybal iyo Dhaataba, iyada oo uu mar walba yoolkayagu yahay adeeg lagu kalsoonaan karo, tayo leh oo qiima soo-jiidashe leh ku baxa,” ayuu yiri Cabdirashiid.
“Waxa aannu aad ugu faraxsanahhay inaanu la shuraakowno SOMTEL iyo Dahabshiil Group si gobolka oo idil horumar uu u gaadho. DARE1 waxa uu tub ku habboon ku gei doonaa Bariga iyo Geeska Afrika. Waxa aannu ku kalsoonnahay awoodda saree e tiknoolajiyadeed ee TE SubCom iyo awoodeeda fulineed, annaga oo ogsoon in gobolla ka baxsan Geeska iyo Bariga Afrika adeeggani u sii gudbi doono,” ayuu yiri Maareeye Casoowe Buux.